“Naychi & Lamin”,Myanmar Real Estate provides best information about selling real estate services in Myanmar!
“Naychi & Lamin”,Myanmar Real Estate services provide best information about to rent Myanmar real estate offers!
“Naychi & Lamin”,Myanmar Real Estate services help to get your dream from banks which support Myanmar real estate!
“Naychi & Lamin”,Myanmar Real Estate offers information about latest, new and good Myanmar real estate projects!
Principal Downpayment %
Rate* Year *
TO GET YUOR HAPPY HOME OF DREAM, JUST CONTACT “NAYCHI & LAMIN”, ONE OF THE BEST MYANMAR REAL ESTATE SERVICES!
ထူးပြည့်ပြည့်စုံအိမ်ရာ မရမ်းကုန်:။ ရန်ကုန်။ Lakhs 1,100.00
ထူးပြည့်ပြည့်စုံအိမ်ရာ မရမ်းကုန်:။ ရန်ကုန်။
မရမ်းကုန်း ၅ ရပ်ကွက် ထူးပြည့်ပြည့်စုံအိမ်ရာ Condo တိုက်ခန်းကဲ့သို့လှပပြီး အိပ်ခန်း3ခန်းပါသော Luxury တိုက်ခန်းလေးကို အရမ်းတန်တဲ့စျေးဖြင့် ရောင်းချလိုက်ပါတယ် ။ * ပထမထပ် * 1500 -Sqft * 1 Master *2Single * Dining Room * Kitchen Room / Exhaust Fan set * Fully Decoration * ကိုယ်ပိုင် ကား parking * ဝရံတာ ၃ ခု * Air con ၄ လုံး တပ်ဆင်ထားပါသည်။ * အလှဆင်ထားသော ကုတင် […]
Mandalay Financial Center Call for price
Mandalay Financial Center
Office Apartments For Rent We would like to offer office apartments to rent in the heart of Elegant city, Mandalay. MFC, Mandalay Financial Center provides complete and the best facilities for its office apartments. Situated on the 80th Street, one of the main street of Mandalay, just about7minutes walk from the corner of […]
1142 sq ft2baths
GEM ကွန်ဒို လှိုင်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်။ Lakhs 3,300.00
GEM ကွန်ဒို လှိုင်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်။
GEM ကွန်ဒို အခန်းရောင်းမည်။ သံလမ်း သုခမှတ်တိုင်အနီး လှိုင်မြို့နယ်။ – 1450 sqft – 2၀ Floor – 1 MBR,2SBR,4Ac – Lift, Carpark, 24 hour security – Near Inya lake, MICT, City mart, Hledan center –6min drive to MICT, Inya lake, Hledan, – 15 min drive to airport & 20 min to Sule/downtown. […]
မင်းဓမ္မကွန်ဒို မရမ်းကုန်း ရန်ကုန်။ Lakhs 3,300.00
မင်းဓမ္မကွန်ဒို မရမ်းကုန်း ရန်ကုန်။
မင်းဓမ္မကွန်ဒို အခန်းရောင်းမည်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ – 2450 sqft – 7th Floor – 1 MBR,2SBR, – Lift, Carpark, 24 hour security –7min drive to Yangon airport, 15 min drive to Hledan center & 25 min to downtown Sule. – Near by MICT Park, City mart, Junction 8 – 3300 lakhs Nay chi & La […]
2450 sq ft3beds 1 bath
သမိုင်း ဘုရင့်နောင်၊ ရန်ကုန်။ Lakhs 290.00
သမိုင်း ဘုရင့်နောင်၊ ရန်ကုန်။
တိုက်ခန်း‌ရောင်းရန်ရှိသည်။ -သမိုင်းမြို့သစ် -(၁၂.၅×၅၀)ပေ, BCC -မီတာသီးသန့်၊ စျေးနီး၊ -ကားမှတ်တိုင် ရထားဘူတာနီးပါသည်။ -ဘုရင့်နောင်စျေးနီးပါသည်။ ဒုတိယထပ်- 320 သိန်း တတိယထပ်- 290 သိန်း ဆက်သွယ်ရန် “နေခြည် လမင်း” အိမ်ခြံမြေ Ph: 09.794390261, 09.793158939 www.myanmar-realestate.com
ခြံရောင်းမည်။ ပုဂံညောင်ဦးလေဆိပ်အနီး Lakhs 1,800.00
ခြံရောင်းမည်။ ပုဂံညောင်ဦးမြို့။ မြေအမျိုးအစား-နှစ်၆၀ဂရန် မြေအကျယ်- 80’×80′ ညောင်ဦးလေဆိပ်မှ ၅ မိနစ်ခန့်သာ။ စျေးကြီးမှ ၈ မိနစ်ခန့်သာ။ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင် စသည့်စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်း။ သိန်း 1800 (ညှိနှိုင်း) ကျယ်ဝန်းပီး တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသည်။ သိန်း 1800 (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com
မြို့တော် ဂေါက်ကွင်း အိမ်ရာ Lakhs 13,000.00
မြို့တော် ဂေါက်ကွင်း အိမ်ရာ
အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးလုံး​ခြင်းအိမ်နှင့်အဆောက်အဦးများပါဝင်သော ခြံကျယ် ရောင်းမည်။ / ငှားမည်။ ရန်ကုန် လေဆိပ်နှင့် ၁၀ မိနစ်ခန့်သာ ဝေးသောနေရာ။ မြို့တော် ဂေါက်ကွင်း အိမ်ရာ။ နှစ် ၆၀ ဂရန်။ ပေ ၁၁၀ x ၁၀၈ ပတ်လည်တွင် အဆောက်အဦး စုစုပေါင်း ၄ ခုပါရှိပြီး ရုံး၊ Showroom၊ Private School အစရှိသည်များ ဖွင့်ရန် အထူးသင့်တော်။ ပါဝင်သောအဆောက်ဦးများ- 1. အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး ၂ ထပ် RC တလုံး (Master Bedroom3ခန်း + အပေါ်- အောက် ဧည့်ခန်း ၂ ခု + ကိုယ်ပိုင် ရုံးခန်း (၂၀ ပေ x […]
11880 sq ft5beds4baths
ပါရမီကွန်ဒို လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ Lakhs 1,850.00
ပါရမီကွန်ဒို လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ပါရမီကွန်ဒို အခန်းရောင်းမည်။ လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး -1450 sqft –2Floor – 1 MBR,2SBR,4Ac – Lift, Carpark, 24 hour security – Near parami seingahar, MICT, City mart, ILBC – 1850 lakhs(nego) for sell Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801